अगस्ट 26, 2011 बेलुका 1:14 बजे
मैले तिनीहरूलाई जाँच गरेको छु तर यी सबै होस्ट गरिएका वर्डप्रेस पसलहरूमा मेरो सामान्य समस्या यो हो कि तपाईंले मलाई अस्वीकार्य नियन्त्रणको तत्व त्याग्नुपर्छ। एक विशाल वेबसाइट चलाउनको लागि मसँग प्लगइनहरू र डाटाबेस पहुँच सहित प्रत्येक पक्षमा पूर्ण नियन्त्रण हुन आवश्यक छ। तिनीहरूको मूल्य निर्धारण प्याकेजहरूले पनि वास्तविकतामा अर्थ राख्दैन - $ 100/महिना 250k पृष्ठदृश्य र 100gb को लागि? कस्तो स्वेच्छाचारी सीमा मैले 2-3 हप्तामा हिट गर्नेछु। म हाल मिडिया टेम्पल प्रयोग गर्दैछु (र यसको लागि धेरै तिर्दैछु) - र उपलब्ध हरेक 'अप्टिमाइजेसन' उपकरण (cahcing, CDN, आदि) प्रयोग गर्दै म 9-10 सेकेन्ड भन्दा राम्रो लोड समय गर्न सक्दिन। मैले बनाउन खोजेको बिन्दु यो हो कि त्यहाँ चाँदीको बुलेट छैन जब यो WordPress लाई छिटो चलाउनको लागि आउँछ। मैले ती सबै प्रयास गरेको छु।
अगस्ट 26, 2011 बेलुका 5:25 बजे
तपाईं तिनीहरूसँग हरेक पक्षलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ, जोनाथन। हामीले चाहेको सबै कुरा गर्नको लागि हाम्रो साइटमा अनुकूलन र प्लगइनहरूको एक टन छ। मलाई विश्वास छ कि मूल्य निर्धारण औसत कर्पोरेट ब्लगको लागि धेरै राम्रो छ... औसत व्यक्तिलाई CDN र क्यासिङ कसरी कन्फिगर गर्ने भनेर थाहा छैन त्यसैले यो निश्चित रूपमा लागत अन्तर्गत छ। BTW: हामी CDN र Cloudflare सँग पनि Mediatemple प्रयोग गर्छौं र यसले हामीले चाहेजस्तो राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको छैन।
सेप्टेम्बर 14, 2011 बेलुका 5:29 बजे
के तपाइँ मिडिया टेम्पलको ग्रिड सर्भर वा समर्पित भर्चुअल सर्भरमा WordPress साइट होस्ट गर्दै हुनुहुन्छ? मसँग ग्रिडमा2वर्षको लागि (mt) को साथ होस्ट गरिएको एक साधारण साइट थियो र लोड समयहरू केवल भयानक, हास्यास्पद ढिलो थिए र प्रशासक क्षेत्र निधोमा केवल एक भयानक पीडा थियो। के मैले उल्लेख गरें कि सम्पूर्ण अनुभव एकदम डरलाग्दो थियो?
मैले ग्रिड कन्टेनर किन्न बाहेक मेरो साइटलाई अनुकूलन गर्न सूर्यमुनि सबै सम्भव गरें र केहि काम गरेन। यसलाई मिनिफाइ, WP सुपर क्यास, इत्यादिको साथ अप्टिमाइज गरियो। मैले अर्को wp होस्ट गरिएको साइटमा CloudFlare प्रयोग गर्ने प्रयास पनि गरें तर लोड समय हास्यास्पद छ। गृह पृष्ठ लोड गर्न 20 सेकेन्ड?
मैले मेरो साइटलाई Hostgator मा सार्न निर्णय गरे र गति वृद्धि रातारात तीन गुणा भयो। म अझै पनि (mt) नियन्त्रण प्यानल छुटाउँछु जुन अविश्वसनीय छ तर मेरो साइटको गतिले राम्रो देखिने इन्टरफेसलाई ट्रम्प गर्दछ।
अब म फेरि नयाँ वेब होस्टको लागि किनमेल गर्दैछु तर यस पटक मैले यसमा 10 माइक्रो साइटहरू होस्ट गर्ने क्षमताको साथ मल्टिसाइट स्थापना गर्न आवश्यक हुनेछ। म (mt) समर्पित भर्चुअल, WP इन्जिन र Page.ly हेर्दै छु। मिडिया टेम्पल धेरै राम्रो सम्झौता जस्तो देखिन्छ र म पहिले नै ग्रिडमा तिनीहरूद्वारा जलाइएको थियो, तर मलाई आश्चर्य छ कि यदि तिनीहरूको समर्पित भर्चुअलले मलाई आवश्यक गति बढाउनेछ र तिनीहरूको नियन्त्रण प्यानलहरूसँग आउने प्रयोगको सहजता।
सेप्टेम्बर 14, 2011 बेलुका 7:09 बजे
MT केवल एक "सौदा" हो यदि तपाइँ WordPress को लागी कुनै विशेष समर्थन बिना मेसिन चाहनुहुन्छ भने। यदि तपाइँ आफैं सुरक्षा गर्न चाहनुहुन्छ भने, आफैलाई गति, स्केलेबिलिटी आफैं, एक CDN आफैं (र यसको लागि तिर्नुहोस्)।
र त्यसपछि त्यहाँ उच्च उपलब्धता छ। दुबै सफ्टवेयर र हार्डवेयर समस्याहरूको कारण, एक-सर्भर स्थापना क्लस्टरको रूपमा उच्च-उपलब्ध हुन सक्दैन।
हाम्रो विचारमा, $20/महिना बचत गर्ने प्रयास गर्दै तर ती सबै चीजहरू आफैंले गर्नु भनेको समय वा पैसाको राम्रो प्रयोग होइन। यो हाम्रो लागि सजिलो छ किनभने हामी हाम्रा सबै ग्राहकहरू माथिको लागतलाई परिशोधन गर्छौं; यदि तपाईं TechCrunch हुनुहुन्न भने एकल साइटले गर्नको लागि समझदार हुनु धेरै हुन्छ।
सेप्टेम्बर 14, 2011 बेलुका 7:38 बजे
धन्यवाद जेसन। म तपाईलाई उद्धरणको लागि तपाईको साइट मार्फत केहि जानकारी शूट गर्दैछु।
अगस्ट 26, 2011 बेलुका 6:17 बजे
नमस्ते जोनाथन, म बुझ्छु तपाईं कहाँबाट आउँदै हुनुहुन्छ, तर तपाईंले यो सबै प्रयास गर्नुभएको छैन यदि तपाईंले हामीलाई प्रयास गर्नुभएको छैन भने। 🙂
ती सीमाहरू एक गाइड हुन् — यदि तपाईंले तिनीहरूलाई हिट गर्नुभयो भने हामी तपाईंको साइट वा कुनै पनि चीज बन्द गर्दैनौं, यसको मतलब यसले हामीलाई बढी खर्च गर्छ र यसले तपाईंलाई पनि बढी खर्च गर्नेछ। हामी यसको बारेमा कुरा गर्न सक्छौं।
हामीसँग धेरै व्यक्तिहरू छन् जुन एक निश्चित बिन्दुलाई अनुकूलन गर्न असक्षम छन्, तर त्यसपछि हामीसँग सुधारहरू हेर्नुहोस्। किनभने: http://wpengine.com/our-infrastructure .
साथै, हामी तपाईंलाई प्लगइनहरू, अनुकूलन कोड, र डाटाबेस पहुँचमाथि नियन्त्रण *गर्न* दिन्छौं, त्यसैले हामीले तपाईंलाई लक आउट गर्नेछौं भनेर नसोच्नुहोस्!
बरु, किन हामीलाई मौका नदिनुहोस्... तपाईंको ब्लगको प्रतिलिपि सार्नुहोस्, त्यसपछि मलाई इमेल पठाउनुहोस् (wpengine मा jason) र हामी के गर्न सक्छौं हेरौं।
9-10 सेकेन्ड अस्वीकार्य छ। व्यक्तिगत रूपमा मैले थीसिसबाट वू फ्रेमवर्कमा स्विच गर्दा मेरो साइटलाई धेरै ढिलो बनायो। म3सेकेन्डमा लोड गर्दै थिए र अब यसको बाटो ढिलो भयो।
मैले भेट्टाएँ VPS साझा होस्टिंग भन्दा धेरै राम्रो छ र धेरै साइटहरू MT मा सारियो जुन मेरो विचारमा एक नौटंकी र झन्झट हो साथै धेरै महँगो हो।
तपाईंले cPanel सँग VPS प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ USd$35 प्रति महिना र वार्षिक प्याकेजहरूको लागि सस्तो। Plesk संग VPS को लागी सस्तो फेरि
नमस्ते ब्राड... यदि तपाईंले मलाई सोध्न मन लाग्दैन भने .. तपाईंले "cPanel सँग VPS USD$ 35 एक महिनामा" कहाँ पाउनुभयो?
के त्यो MT मा छ? तपाईले त्यहाँ धेरै साइटहरू सार्नुभयो भन्नुहुन्छ तर तिनीहरूको नौटंकी के हो? के तपाईं तिनीहरूसँग खुसी हुनुहुन्छ?
तपाईको कमेन्टले म अलि अलमलमा परेको छु ।
बेनामी, मलाई लाग्छ कि तपाईंले यी व्यक्तिहरू एकदम फरक छन्। पहिले, तपाईंसँग SFTP पहुँच छ त्यसैले तपाईंले प्लगइन साइडमा आवश्यक परिवर्तनहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंसँग पूर्ण फाइल पहुँच भएको हुनाले, तपाईंले डाटाबेससँग आफूले चाहेको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। म पनि MediaTemple मा छु र म क्यासिङ र CDN प्रयोग गर्दैछु... तर तपाईं र म दुर्लभ नस्ल हौं। यदि कसैले पृष्ठ गतिको लागि अप्टिमाइज गर्ने तरिका बुझ्दैन भने, WP इन्जिन एक उत्तम समाधान हो किनभने तिनीहरू प्रदर्शनको बारेमा चिन्ता गर्छन् त्यसैले तपाईंलाई आवश्यक पर्दैन। पृष्ठदृश्य र ब्यान्डविथको मात्रा औसत कर्पोरेट ब्लगरलाई चाहिने भन्दा धेरै हुन्छ। यदि तपाइँ तपाइँको साइट अनुकूलन गर्न र CDN कन्फिगर गर्न एक पेशेवर भाडामा लिनु भएको थियो भने, यो धेरै, धेरै अधिक खर्च हुनेछ।
अगस्ट 26, 2011 बेलुका 5:01 बजे
अगस्ट 26, 2011 बेलुका 5:14 बजे
अझै छैन - तर यो हुनेछ!
अगस्ट 26, 2011 बेलुका 5:16 बजे
साँच्चै? मैले सोचें कि तपाई पहिले नै बसाइसक्नुभयो। यदि होइन भने, तपाइँ गति संग धेरै राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ जस्तै यो छ।
अगस्ट 26, 2011 बेलुका 5:22 बजे
मैले क्लाउडफ्लेयर प्रयोग गर्न थालें - यसलाई जाँच गर्नुहोस्, यो नि:शुल्क सेवा हो र मिडियाटेम्पलमा हाम्रो होस्टिङ सर्भरहरूबाट धेरै भार लिएको छ। यो सबभन्दा छिटो होइन, तर समग्र गति यसको कारणले सुधार भइरहेको छ।
अगस्ट 26, 2011 बेलुका 5:50 बजे
अति उत्तम। मैले तिनीहरूलाई जाँच गर्नुपर्छ। विडम्बनाको रूपमा, WPEngine को मेरो मनपर्ने सुविधा जब मैले यसलाई जाँच गरें त्यो गति वा वितरण थिएन। यो 1-क्लिक स्टेजिङ थियो। त्यो कति मीठो छ?
अगस्ट 28, 2011 बेलुका 1:40 बजे
मलाई शंका छ कि जेसन कोहेन समावेश भएको केहि पनि ठोस सुन हुनेछ। मलाई उहाँको CodeCollaborator को आवश्यकता थिएन, एकल-व्यक्ति टोली, LOL। तर, म उहाँलाई पछ्याउँदै छु र दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि उहाँको दर्शन अध्ययन गरिरहेको छु।
जब उनले पहिलो पटक WP इन्जिनको बारेमा लेखे, म उत्सुक थिएँ। निस्सन्देह, उसले समय समयमा यसलाई रिट्वीट गर्छ र आज म कसरी पप इन।
विडम्बनाको रूपमा, म WP इन्जिनको लागि तयार छैन, अझै, त्यसैले म CloudFlare मा हेर्दैछु।
सेप्टेम्बर 14, 2011 बेलुका 5:33 बजे
यस कुराकानीको फलोअपको रूपमा - मैले Anglotopia.net को लागि Wpengine मा होस्टिङ स्विच गरें र मेरो साइट धेरै छिटो चलिरहेको छ। म केही अन्य साइटहरूको लागि MT सर्भर राख्दै छु जहाँ लोड समय कुनै समस्या होइन तर अहिलेको लागि Anglotopia जहाँ यो हुनु आवश्यक छ।
जुन 26, 2012 बिहान 4:45 बजे
यो एकल साइट को लागी धेरै महँगो छ। म यसको सट्टा अप्रबन्धित VPS मा जानेछु। मसँग असीमित डोमेनहरू र xcache जस्ता क्यासिङ प्रणालीहरू हुनेछन्।